PEAR DUCHESS - ORODKA ROODHIDA AH
Waxaa la ogyahay in nafaqada habboon ay qayb ka tahay "aasaas" ee caafimaadka aadanaha.
Qeyb ka mid ah hab nololeedka caafimaadka leh waa isticmaalka miraha iyo khudaarta.
Waxay ka timaadaa cuntooyinkaas oo qofku qaato walxaha loo yaqaanno fitamiin.
Summer waa muddada ugu wanaagsan ee ubax iyo Bisaylkiisa ee midhaha geedo kala duwan iyo duurka.
Sidaa darteed, waa xagaaga in aan ka heli karno nafaqooyinka laga helo khudaarta, miraha, iyo berry.
Mid ka mid ah ilaha fitamiinada waa pear.
Tixgeli koox u dhow noocyo macmacaan ah oo isbarbar socda "Duchess". "Pear Duchess" waxaa ka mid ah laba nooc oo isteroberi ah - "Duchess summer" iyo "Duchess winter".
Noocyada sharaxaadda "Xilliga Duchess"
Koox ka kooban noocyo isbaranno ah "Duchess" waxaa la baddalay by breeder caan ah, Britishman Wheeler, iyo Williams ku faafay dhaqanka this.
Geedka xagaaga "Dushes" waa dhexdhexaad ama mid hooseeya. Taajku waa mid ballaaran, oo leh tiro badan oo caleemo, wuxuu leeyahay qaabka Ahraamta. Caleemaha taajka waa weyn, waxay leeyihiin qaab quruxsan, dusha sare iyo iftiin cad, calaamadda ugu dambeysa. Tirada ubaxa ee inflorescence gaaro 6-7 gogo '. Waayo, noocyo kala duwan ayaa ah dabeecadda dambe iyo ubax dheer. Intaa waxaa dheer, ubaxyada si fiican u dulqaadan by isbedelka xaaladaha cimilada.
Cabbirka fetus wuxuu noqon karaa mid dhexdhexaad ah iyo weynba, miisaankeedu yahay 180g. Qaabku waa mid caadi u ah noocyadan dhirta, waxoogaa yar. Midabka miro wuxuu ku xiran yahay xilliga Bisaylkiisa: marka hore, maqaarka waa cagaar iftiin, ka dibna huruud ah. Hilibka midhaha waa mid casiir leh, kareem-midab leh, macaan. Sababtoo ah dhadhanka, "Duchess xagaaga" waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee macmacaanka macaan.
Midhaha geedka ku xiran ilaa dhererka dhammaadka August. Pear caano ku kalliftay ma lumiso bandhiggooda laba toddobaad. Wax soo saarka kala duwanaanshahan waa mid sare, 230-250 kg oo isteraris ah oo ka mid ah geed.
- dhalidda ugu wanaagsan
- dhadhan wanaagsan
- Ku dhawaad ​​ma dhaawacmin qolofta
- iftiinka gaadiidka
- si xun u waxyeeleeyay aphids
- heerka celceliska iska caabinta abaarta iyo barafka
Sharaxaada kala duwan ee "Duchess winter"
"Duchess winter" waxaa laga bilaabay Belgium. Geed sare, sii kordhaya dheer ku filan, dalagga waxaa laga heli karaa 7-8 sano ka dib beerashada. Waxay leedahay taajajir balaaran oo qaabka Ahraamta ah. Ka tagaa elliptical, cabbirka dhexdhexaad ah. Miraha Kala duwanaanshahan waa mid aad u ballaaran, miisaanku wuxuu gaaraa 350-400 g, mararka qaarkood 600 g. Waxay leeyihiin dhar ganacsi oo soo jiidasho ah, dusha sare ee jaalaha ah oo leh jaale ah.
Hilibka midhaha waa caddaan, casiir leh, wuxuu leeyahay dhadhan macaan. In kasta oo xaqiiqda ah in miraha ay sii joogi karaan geedka waqti dheer, waxay dhici karaan sababo cimilada ama dabeecadaha ciidda, tan iyo miro dhan oo weyn. Waa inaadan qaadin dalagga aan qaan gaarin, haddii kale dhammaan tayada dhadhanka ayaa lumin doona. Sida soo-saarka, tilmaamayaashu waa celcelis ahaan (90-100 kg oo isteroberi ah oo ka yimid geed).
Harvestku waa inuu ahaado Oktoobar. "Duchess Winter" waxay u egtahay inay daadi inta lagu guda jiro kaydinta iyada oo aan lumin dhadhan. Isteroberi ayaa daadi kara ilaa Diseembar, iyo meel qabow waxay ku seexan karaan ilaa May.
- Cabbirka weyn ee miraha
- Waxyeello ma laha inta lagu jiro kaydinta
- awood u leh inuu daadiyo inta lagu jiro kaydinta
-suwa iska caabinta barafowga
- rusheynta midhaha
- heerka qiyaasta dhaawaca qolofka
-labbada pear dhadhanka xilliga goosashada hore.
Inta ugu badan Waqti fiican oo loogu talagalay beertu ku beerto - qeybtii labaad ee Abriil, ka hor inta aan la gooyin. Waxaa suurtogal ah in lagu beero pears labadaba godadka, iyo boogaha hore loo diyaariyey. Haddii ciidda ay saboolka tahay, markaa waxaad u baahan tahay inaad ceel u sameysid beeritaanka, iyo gudaha buuxi ciidda bacrin ah, oo samee xilliga dayrta. Qoto dheer ee godadka noocan oo kale ah waa qiyaastii 1 m, dhexroorkuna waa 60-70 cm, waa wax aan macquul aheyn in dhirta ay aadaan qoto dheer, sababtoo ah waxay taasi keeni doontaa dhimashada dhirta.
Markaad beerto, ha ku shubin digada cusub ee godadka, maxaa yeelay waxay taasi keeni kartaa gubasho xididada. Waxay u fiicantahay in la "hagaajiyo" ciidda iyadoo la isku darayo dhul bacrin ah, compost iyo peat (2-3 baaldigoodba god kasta). Laga soo bilaabo isku dhafkan waxaad u baahan tahay inaad sameysid shubo oo aad u qaybisid xididdada yaryar. Sidoo kale, geedka mustaqbalka wuxuu u baahan yahay taageero dabaysha, sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay inaad wadatid qoto dheer oo aad dhulka ku gashid oo ku xir xuddunta seedka si aad u hesho taageerada. Garter wuxuu ka fiican yahay inuu sameeyo qaab "sideed" si looga fogaado dhaawaca jirkiisa.
Labada nooc ee kooxda "Duchess" is-sharixin, taas oo ah, waxay sidoo kale u baahan yihiin pollinator. Xilliga xagaaga "Dushes" ayaa ku habboon rimanka noocan ah sida Clappest Favorite, Forest Beauty, Bere Bosc, Olivier de Serre. Markaa, jiilaalka "Duchesse" wuxuu u baahan yahay "Olivier de Serre", "Bere Ardanpon" iyo kuwo kale. Sidoo kale noocyada noocan ah waxay u baahan yihiin carrada kala duwan. Haddii "Williams" aysan qabin carrada, markaa xilliga qaboobaha "Duchesse" (ama xilliga qaboobaha) waxay u baahan tahay dhul bacrin ah meelo diiran oo la ilaaliyo.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan beeritaanka saxda ah ee isteroberi.
Dyushes geedo u dulqaadan la'aanta qoyaanka ee ciidda, laakiin waxay weli u baahan yihiin in la waraabiyo. Miisaanka waraabinta noocan oo kale ah waa 2-3 baaldiyo oo biyo ah sannadkiiba nolosha nolosha. Waxaad u baahan tahay inaad biyo ka hor inta ubax iyo ubax ka dib (dhammaadkii May - bilowgii June). Haddii ay lagama maarmaan tahay, waxaad dhali kartaa geedaha xilliga deyrta. Ka dib marka ciidda ay ka buuxdo qoyaan, waxaa lagama maarmaan ah in la dabciyo dhulka si loo furo helitaanka ogsijiinta si nidaamka xididka.
Mulching waa nidaam looga dhigo geedaha oo dhan. Iyadoo bilawga ah ee cimilada qaboobaha, xididdada aan la ilaalin karin waxay qaboojin karaan, iyo natiijo ahaan, dhirta si fudud uma noolaan doonto illaa guga. Miro-wareegka ayaa difaacaya nidaamka asaasiga ah xagasha heerkulka. Isteroberyadu way ka fiican yihiin godadka mulch, humus. Haddii aysan suurtagal ahayn, markaa waxaad isticmaali kartaa haramaha, cawska. Qallajin waa in la sameeyaa ka hor inta aaney heerkulku hoos udhicin, taas oo ah, bilowgii - badhtamaha-badhtamaha.
Si loo ilaaliyo pear ka yimaadda saameynta waxyeelada ee qaboobaha iyo qaboobaha xilliga qaboobaha, waxaa lagama maarmaan ah in lagu duubo qaybta hoose ee jiriga leh maro suuf ah ama wargeys. Ka dib marka barafku hoos u dhaco, waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso inta ugu badan ee suuragalka ah ee ku saabsan seedling. Barafku waa ilaalinta ugu fiican ee nidaamka xididka ah ee qabow, laakiin xaalada haddii aysan jirin dhaxan daran.
Sida geedo baaluq ah, waxay si fudud u baahan yihiin ilaalin ku saabsan gabaad. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad sameyso bowd yar oo ku wareegsan geed walba ama xayndaab caadi ah oo dhan ee goobta.
Gooyooyinka waxaa sida ugu fiican loo sameeyaa guga, maaddaama xilliga jiilaalka ay waxyeelo u geystaan ​​heerkul hooseeya, iyo xagaaga, oo ay la socdaan laamaha, caleemaha ayaa sidoo kale laga yaabaa in laga saaro, taas oo horseedi karta cawaaqib xun ee geed yar. Sanadka ugu horeeya, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo qiyaastii ¼ qaybta dhexe ee jirkeeda, iyo laamihii lateral ee ka sareeya burooyinkeeda.
Sidaa darteed, pear koraan ma aha oo kaliya sare, laakiin sidoo kale ballaadhin, taas oo horseedi doonta soo baxa ee burooyinkoodii cusub. Laakiin sanadka labaad qaybta dhexe ayaa u baahan in la gaabiyo 20-25 cm, iyo laanta kaabayaasha si ay u sameeyaan qashinka la jarjaray - laamaha sare waa inay ka gaaban yihiin kuwa hoose. La gaabiyo laanta laamuhu waxay noqon kartaa 5-8 cm.
Inta lagu jiro sanadka ugu horeeya ee koritaanka, isteroberi uma baahnid quudin dheeraad ah, sababtoo ah waxay hagaajiyeen dhulka godadka inta lagu guda jiro beerashada. Inta badan bacriminta ayaa u baahan in la isticmaalo xilliga dayrta. Bacriminta macdanta waxaa loo baahan yahay in la sameeyo sanadkiiba, organic - hal mar 3 sano. Per 1 sq.m. Waa suurad wacan in lagu daro 5-8 kg oo ah Bacriminta organic, 30-20 g of superphosphate, 20-30 g of chloride potassium, iyo 20-25 g of ammonium nitrate. Dhar kasta waa in lagu sameeyaa godadka qoto dheer ee 15-20 cm hareeraha wareegga wareegga, kaas oo sharxaya taajka.
Tan iyo markii "Duchess" ay waxyeeleeyeen qolofta iyo nuugista, markaa waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso hababka loo ilaaliyo geedaha cayayaanka.
Kabuub - mid ka mid ah cudurada ugu caamsan ee pear. Labada caleemaha iyo miraha labadaba waxay u soo bixi karaan fungus. Kabuubka waxaa lagu kala qaadaa caleemo dhacday. Dhibco mug leh waxay u muuqdaan caleemo cudurka iyo miraha.
Waa suurtogal in lagula dagaallamo cudurkaan adoo daaweynaya geedo leh 1% Bordeaux dareere ama 0.5% maadada oxychloride ee naxaasta ah inta lagu jiro fasaxa birta iyo dhamaadka ubax. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la gubo caleemo jir ah oo beerta dhulka ku hareereysan oo leh xal 0.3% nitrafen.
Jeexa jeexjeexa jilbaha caleemaha dhacay, burooyinkeeda miro. Caabuqa wuxuu dhacaa isagoo dhigaya ukumaha kelyaha iyo caleemaha. Medianitsa waxay ka nuugaan dheecaanka geedka, sidaas awgeed way daciifisaa. Si loola dagaallamo cayayaanka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo dhirta ole-kulubka, karbofos (90g halkii 10 litir oo biyo ah), iwm ka hor intaan la beeriin. Si loo baabi'iyo dirxiga ee nuugista ee muddada koritaanka firfircoon ee pear ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu geed gareeyo cayayaanka organophosphate insecticides.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Orodka roodhida ah 2019